Ndeipi iyo Net Inokurudzira Score (NPS) Sisitimu? | Martech Zone
Vhiki rapfuura, ndakaenda kuFlorida (ndinozviita makota ese kana zvakadaro) uye kekutanga ndakateerera bhuku rinonzwika munzira yekudzika. Ndakasarudza Mubvunzo Wekupedzisira 2.0: Makambani Anosimudzira Makambani Anobudirira Sei muNyika Yevatengi mushure mekutaurirana nevamwe vanoita zvekushambadzira online.
The Net Inosimudzira Score system yakavakirwa pamubvunzo wakapusa… iyo wekupedzisira mubvunzo:
Pachiyero che0 kusvika 10, iwe ungangoita sei kutumira shamwari?
Bhuku rinoenda kunotsanangura kuti rakavhurika sosi system yakagamuchirwa kumabhizimusi ese, anowanzo gadziridzwa kupfuura 0 kusvika 10 sikero, mubvunzo dzimwe nguva unosiyana, uye mibvunzo yekutevera yakagadziridzwa uye yakapihwa nguva yekupa zvibodzwa zvinomiririra hutano yekambani yako. Ramba uchifunga kuti haisi mamakisi chaiwo anodikanwa kufanotaura kuti kambani yako iri kuita nemazvo sei, inofanirwa kuongororwa ichipesana nezvibodzwa zvese zvevanokwikwidza muindastiri yako. Iwe haufanire kunge uine 9 kana mamwe maindasitiri ako achisunda 3s! Mamwe maindasitiri anongokwezva vatengi vanotyisa.
NPS iri kuve nzira yakajairika yekuyera kuvimbika kwevatengi uye kukanganisa kwekushambadzira, kutengesa, kushandira vatengi uye kunyangwe hutano hwemari hwekambani. Kusiyana neakawanda epfupi-kwenguva makiyi ekuita metric yekambani, NPS inopa tarisiro yekuti vangangoita sei vatengi vako kuti vagare newe uye vachitokukurudzira. Sezvo kuchengetedza vatengi kuchikosha mukuita purofiti uye kutaura kwemuromo ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuwana vatengi, NPS iri kuzviratidza pachayo kuva sisitimu yakanaka kwazvo yekufungidzira hutano hwakareba hwekambani. Kana madhipatimendi ese uye marongero akaenderana kukwidziridza kuvimbika kwako kwevatengi, haumhanye njodzi yekuve nemakwikwi esirosi mukati mekambani anogona kuburitsa huwandu hukuru - asi usape ruzivo rwakakura rwevatengi.
Pakati paro, NPS = Percentage yeVasimudziri - iyo Peresenti yevanodzinga. Saka, kana 10% yevatengi vako vachisimudzira kambani yako uye 8% vari kukuvadza zita rako kuburikidza neyakaipa izwi-remuromo, iwe une NPS ye2.
Iyo Net Inosimudzira Score system inoputsa vatengi vako kuva vanosimudzira, vanokanganisa uye mapasipoti. Yese kambani inofanirwa kuda kudzikisira vashoropodzi sezvo zvinotora vangangoita vashanu vanosimudzira kurwisa vese vanokanganisa… rinova ibasa chairo! Uye bhizinesi rega rega raizove riri nani zvakanyanya kana rikadzivirira mapaseti nevanozvidza zvachose uye rakwezva vatengi chaivo - vanosimudzira. Kunze kwekuvimbika kwevatengi, NPS iri kuitawo nzira yayo mukuongorora kwekugutsikana kwevashandi. Sezvaungatarisira kuwana vatengi kusimudzira bhizinesi rako, iwe zvakare unoda vashandi vanohusimudzira futi!
The folks at Mumiriri akaisa pamwechete iyi infographic paNet Promoter Score anozvipfupisa
PS: Kunyange bhuku racho raive rakanakisa, IMO ini ndinofunga kuti nyaya yacho yaigona kunge yakadzikiswa kubva pamusoro peanopfuura maawa manomwe kuenda kune vaviri chete, zvakadaro. Ndihwo hukama hwangu hwehukama kana iwe uchida kutenga bhuku racho.
Tags: AlgorithmKuverengamutengi anotyairwa nyikakuvimbika kwemutengivanovhiringidzamaitiro ekuverenga net promoter mamakikuverenga sei npsNet InosimudziraNet Anosimudzira Makambaninet inosimudzira mamakinpsnps equationnps fomulapasivesvanosimudzirachibozwaWekupedzisira Mubvunzo 2.0
Unofanirwa here Kugadzira Yako Yakagovaniswa Midhiya?